The Voice of Muslim in Myanmar (English and Burmese version) - We Love Myanmar
Posted on September 13, 2017 September 13, 2017 by We Love Myanmar
I’m Muslim and want to live in Myanmar peacefully. The situation happen in Rakhine state is not because of religion. The country we live here, Myanmar, is our mother land. We lived since my great, great, great, great, grandfather. I’m doing great and to beagood citizen here. Also, I do support my current government and party.
If you made just lobbying for nonsense things and wasting time propaganda, then do yourself in your country. Our Muslim can live in Myanmar. So, don’t mess with us. God always give us hope and peace. Also taught, live simply. Stay what you are. I strongly won’t accept the Rohingya in our country, they are not our ethnic.
As the mentioned, this is invasion. Stop spreading the rumors and wrong information to the world. Again, the conflict in Myanmar is not related with Religion
ကျနော် မူဆလင်ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက ဘာသာရေးကြောင့် မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သည် ကျနော်တို့ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့် အဘိုး အဘိုး အဘိုး အဘိုး ဘိုးဘေးခေတ်ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ရတာ လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်လဲ နိုင်ငံ့သားကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရနဲ့ ပါတီကိုလဲ ထောက်ခံအားပေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိပါယ်မရှိတဲ့ အရေမရ အဖတ်မရအတွက် စည်းရုံးပြီး အချိန်ကုန်ခံ ၀ါဒဖြန့်နေမယ်ဆိုရင် သင့်နိုင်ငံမှာ သွားလုပ်ပါလား။ ကျနော်တို့ မူဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နဲ့ လာမရှုပ်ပါနဲ့။ ဘုရားသခင်က မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ကျနော်တို့ကို ပေးတယ်။ သင်ကြားပေးခဲ့တာ ရှိသေးတယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ပါ။ အရှိကိုအရှိအတိုင်း နေထိုင်ပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာကို ကျနော်အနေနဲ့ အပြင်းအထန် လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ သူတို့က ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ မပါပါဘူး။
ကျနော် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း အခုကိစ္စက သူတပါးနိုင်ငံမှာ နယ်ကျွံ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောလဟာလသတင်းကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြန့်နေတာကနေ ရပ်လိုက်ပါတော့။ ထပ်ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာ ဒီပဋိပက်ခက ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
မူလရေးသားသူ Originally published in English by Nyi Min San
ဗမာစာသို့ ဘာသာပြန်သူ Translated into Burmese by Levi Sap Nei Thang
This entry was posted in Myanmar and tagged I Love Myanmar, Islam, Malala, Malala Yousafzai, Muslim, Nobel Prize, Rakhine, Rohingya, Suu Kyi, We Love Myanmar.
8 thoughts on “The Voice of Muslim in Myanmar (English and Burmese version)”
Takeagood care of him please for his safety.
Law Mg says:
Maha Nwe says:
It’s all are coming from your heart ? And you said that they are not our ethnic. I strongly won’t accept the Rohingya in our country..But I thought many Muslim are same on this world …